Qaramada Midoobey oo ka codsatay Itoobiya in ay Ciidamadeedu sii joogaan Soomaaliya
WARARKII: Aug 15, 2007
Mas�uuliyiin ka tirsan Maxakiimta Islaamiga iyo Baarlamaanka xorta oo soo gaaray Bu�aale�
Diyaarad ku sii jeeday Boosaaso oo ku burburtay Barbara
Cali Geedi �Dowladdu waxay sameyneysaa khad cagaaran�
Buubaa �Waxaa la gaaray xiligii ciidmada Itoobiya isaga bixi lahaayeen Soomaaliya�
Iska hor imaadyo iyo weeraro weli ka jira Magaalada Muqdisho..
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Bu�aale ee Gobalka J/dhexe, waxay sheegayan in maalintii shalay ahyd magaaladaasi soo gaareen mas�uuliyiin ka tirsan Maxaakiimta Islamiga ah iyo kooxaha Baarlamaanka Xorta ee fadhigoodu yahay magaalad Asmara ee dalka Ereteriya.
Mas�uuliyiintaasi ayaa waxa la sheegay in ay halkaasi keentay diyaar, waxayna markiiba kulan la yeesheen Odoyaasha iyo Waxgaradka deegaankaasi, waxayna uga warameen sababaha ay u joogaan dalka Ereteriya, waxaana wafdigaani hogaaminayey C/qaadir Xaaji Max�ed Dhaqane oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ee la magacbaxay Baarla-maanka xorta ah, waxa uuna Odoyaasha iyo Waxgaradka Bu�aale u sheegay in 1-da September la isugu imaan doono shir ay ka qaybgali doonaan Odoyaal, Waxgarad, Siyaasiyiin kuwaas oo uu sheegay in ay ka kala imaan doonaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, isagoo sheegay in looga arrinsan doono sidii ciidamada Itoobiya dalka looga saari lahaa, isla markaan loo waji lahaa sidii loo dhisi lahaa dowlad Soomaaliyeed.
Waa markii ugu horeysay oo kooxo mucaarad ah ay soo gaaraan Koonfurta Soomaaliya, waxaan la filaya in sidoo kale gobalad dalka ay gaaraan wufuud ka tirsan Maxakiimta Islaamig a ah iyo Baarlamaanka xorta ah, kuwaas oo ka dhaadhicin doona Bulshad sidii ay uga qayb-qaadan lahaa sidii dalka looga xoreyn lahaa wax ay ugu yeereen Guemysiga Itoobiya.
Shalay galabnimadii ayaa diyaarad laga leeyahay shirkad reer Kenya oo ku sii jeeday magaalada Boosaaso ayaa waxaa la sheegay in diyaaraddaasi ay ku degi weysay garoonka Diyaaradaha ee Boosaaso, waxayna shaqaalihii saarnaa diyaaraddaasi ay isku dayeen in Diyaaradda ay ku dejiyaan Garoonka balse ay awoodi kari waayeen, waxayna markiiba dambe u dhaqaaqeen dhinaca garoonka Diyaaradaha ee Barbara, markii ay dhowr jeer dul heehaabtay ayay si qasab ah ku degtay garoonka, waxaana markiiba ka booday lix qof oo ahaa shaqaalihii diyaaraddaasi.
Diyaaraddaasi oo iyadu ahayd mid xamuul ah oo u rarneyd Magaalada Bosaso ayaa meeshii ku burburtay, balse shaqaalihii ayaa ka badbaaday waxayna haatan ku sugan yihiin Hoteel ku yaal Magaalada Barbara. Diyaaraddaan oo nooceedu yahay Antanov ayaa lagu sameeyey dalka Ruushka , waxayna ka mid tahay diyaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya.
Wasiirka waxbarashada ee Dowladda Federaalka Ismaacil Hurre Buubaa oo khudbad ka jeediyey Baarla-maanka fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo, isagoo ka hadlayey waxqabadka wasaaradda Waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu wax badan ka qabatay dhinaca waxbarashada, isla markaana ay xoojisay xiriirka Waxbarasho u dhexeeya Soomaaliya iyo Dowladaha Shisheeye.
Buubaa waxa uu sheegay in la gaaray xiligii ciidamada Itoobiya ka bixi lahaayeen wadanka Soomaaliya, waxa uuna uga mahadceliyey hawshii ay siiyeen Dowladda Federaalka, isagoo sheegay in aysan marnab ilaabi doonin.
Buubaa waxa uu sheeg ay in kooxaha ka soo horjeeda Dowladda loo baahan yahay in ay ka soo qaybgalan shirka qaranka Soomaaliya, si ummadda Soomaaliyeed ay dibaatada uga baxdo, isla markaana carruurta Soomaaliyeed u helaan waxbarasho ay mustaqbalka u aayan.
Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi ayaa waxa uu shalay ka dhawaajiyey in Dowladda Federaalka ay sameyn doonto qad cagaaran oo la mid ah midka Ciraaq uu Mareykanku ka sameeyey, kaas oo lagu ilaaliyo dhamaan madaxda Dowladda Ciraaq iyo Saraakiisha Mareykanka.
Geedi waxa uu sheegay in Dowladdu u baahan tahay goob ammaan ah oo ay ku shaqeyso, hase yeeshee marka la is barbardhigo wadanka Ciraaq iyo Soomaaliya waa kuwo aad u kala duwan, waayo dalka Ciraaq dal balaaran oo ay ka jiraan kooxo dhowr ah, isla markaana waxaa shaqeynaya nidaamkii Dowladnimo iyo waliba adeegyadii Bulshada, hase yeeshee Soomaaliya ma jiraan adeegyadii Bulshada iyo awoodii dowladnimo, waxaana Dowladda gacan siiya ciidamada Itoobiya oo qudhooda lagu hayo weeraro joogto ah.
Qadka cagaaran ee ka jira dalka Ciraaq, waxaa maalin walba lagu weeraraa hoobiyayaal, waxaan dhacday kulan uu Baarlamaanku lahaa uu ka dhacay qarax aad u weyn, iyadoo Mareykanku uu meeshaasi si aad ah u waardiyeeyo.
Waxaa Magaalada Muqdisho weli ka sii socda dagaalada iyo iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda oo dhinac iyo kooxaha ka soo horjeeda waxayna weeraradii ugu dambeeyey ka dhaceen Suuqa Xoolaha, Wadada Warshadaha, Suuqa Bakaaraha iyo Jidka Wadnaha.
Weeraradii ka dhacay Suuqa Xoolaha aya waxaa lala beegsady kolonyo ka tirsan Ciidamada Dowladda, waxaana l sheegay in weerarkaasi ku dhaawacmeen dhowr askari, hase yeeshee rasaastii ay rideen waxay waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah, sidoo kale Bam lagu weeraray ciidamada Dowladda ee ku sugan Suuqa Bakaaraha, waxa uuna weerarkaasi waxyeelo ka soo gaartay dad ka adeeganayey suuqa.
Dhinaca kale waxaa sii kordhay gaari ku sii jeeday Degmada Cabudwaaq ee gobalka Galguduud oo maalintii doraad ahyd rasaas ku fureen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Dowladda, waxaa ilaa iyo haatan ku geeriyooday 16 qofood, iyadoo dadka intooda badan ku dhinteen isbitaalada kal duwan ee Magaalada Muqdisho, waxa uuna weerarkaasi ku soo beegmay xili Hay�adda Xaquuqda Aadanaha Human Rights Watch soo saartay warbixin ku aadan in soomaaliya ka dhaceen xadgudubyo ay gaysteen ciidamada Itoobiya kuwa Dowladda Federaalka iyo waliba kooxaha ka soo horjeeda.
Waxaa maalmahan sii xoogeysanayey warar sheegayey in Ciidamada Itoobiya ka baxayaan guud ahaan dalka Soomaaliya, hase yeeshee warar laga helay Qaramad Midoobey ayaa waxay sheegayaan in Qaramada Midoobey ay Dowladda Itoobiya ka codsatay in Ciidamadeeda sii joogaan ilaa iyo horaanta sanadka cusub, xiligaas oo ay Qaramada Midoobey sheegtay in ay Soomaaliya ka hawlgali doonaan ciidamo hoos imaanaya Qaramada Midoobey.
Codisga ka yimid Qaramada Midoobey ayaa waxa la sheegay in ay diiday Dowladda Itoobiya, waxayna ku adkeysaneysaa in ay ciidamadeeda kala baxeyso gudaha dalka Soomaaliya, hawshana ay ku wareejineyso Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa Midowga Afrika, hase yeeshee Dowladda Mareykanka ayaa lagu waramay in ay Dowladda Itoobiya ku cadaadineyso in ciidamadeeda sii joogaan dalka Soomaaliya tan iyo inta ay Qaramada Midoobey ciidamo ka keeneyso. Dhawaan ayay Qaramada Midoobey isku raacday in Soomaliya loo diro ciidamo hoos yimaada dalladda Qaramada Midoobey. Hubkii badnaa ee ciidamada Itoobiya Soomaaliya ka yiilay ayaa la sheegay in dib loogu celiyey dalka Itoobiya, isla markaana waxaa la arkayaa ciidamo fara badan oo dib ugu labanaya gudaha dalka Itoobiya.
Xaaskii uu ka geeriyoo-day Yaasir Carafaat oo Dowladda Tunisa kala noqotay dhalashadii
Dowladda Tunisia ayaa dhalashadii kala noqotay xaaskii uu ka geeriyooday Hogaamiyihii wadanka falastiin oo lagu magacaabo Saaha Carafaat, inkastoo Dowladda Tunisia aysan wax faahfaahin ka bixin kala laabashada dhalashadaasi, haddana warar soo baxaya waxay sheegayaan in Saha Carafaat uu khilaaf soo kala dhex galay iyada iyo Dowladda wadankaasi, waxayna markii dambe taasi keentay in dhalashada lagala laabto.
Saha oo guri weyn ku lahayd Magaalada Tunis ayaa shalay u soo ambabaxday jasiiradda Malta oo ay haatan ku sugan tahay, waxaana lagu wada in ay u dhaqaaqdo dhanka wadanka Masar oo ay guri kale ku leedahay.
Saha Carafaat waxay dhalashada Tunisia qaadatay sanadkii hore, waxaana loo siiyey maadaama ninkeedii geeriyooday in si nabadgelyo ah ugu noolaato dalkaasi.